प्रेममय गितले शासन गर्दै दर्पन राई «
प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०७५, सोमबार १६:१३
काठमाण्डौ- इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरु आफै धेरै मन मनैमा कुरा गर्छन, आफैमा प्रश्न गर्छन र बहस गर्छन अनि एउटा निर्ष्कष निकाल्छन । त्यस्तै एक ब्यक्ती हुन, चर्चित गितकार दर्पन राई । उनले गित लेखनले बजार चर्चा मात्र होईन युवाको ढुकढुकी बन्न सक्छन । कबी तथा साहित्यकार भुपाल राईले भने झै ‘गितले पनि शासन चलाउछ,’ प्रेम र युवाको बिषयमा एउटा शासन गित मार्फत गर्दै छन दर्पन राई ।
दर्पन राई सिर्जनसिल, बिचारशिल र मनोरन्जनत्माक कुरा गित मार्फत गर्छन । मन, मतिष्क र मुटुले प्रेमका कुरा गर्छन र प्रेम पिडाको भाबलाई एउटा बिम्बको रुपमा शुन्दर गितबाट प्रस्तुत गर्छन। ‘तिमीले बाटो फेर्‍यो अरे’को अपार सफलतापछि ‘तिमीले बाटो फेर्‍यो अरे-२’ दर्पण राईले ल्याउदै छन। उनले मुन्धुमस्टारसँगको बसाई पटक पटक भने ‘तिमीले बाटो फेर्‍यो अरे-२’ निकै स्पेशल छ किनकी मेहनत गरेक छौ । प्रेमीले चाहदा–चाहदै प्रेमिकाले बाटो फेरिएपछिको अवस्थालाई उक्त गीतमा चित्रण गरिएको छ । यस्तै, ‘तिमीले खाएको कसम साँचो भाको भए’लाई त्यही स्टोरीबाट उठाएको गीतकार दर्पणले बताए । ‘तिम्ले बाटो फेर्‍यौ अरेमा ‘अरे’को कुरा अर्थात् कसैले सुनाएको ‘हल्ला’लाई आधार मानिएको छ । अहिले त्यसैलाई टेक्दै ‘तिमीले खाएको कसम साँचो भाको भए’ बनाएको हुँ,’ दर्पणले भने ।
दर्पन राईको प्रेम
दर्पन राईलाई सानै देखी केटिहरुले खुब मन पराउथ्यो , त्यही भएर जिबनमा निकै केटिहरु बाट प्रेम प्रस्ताब आएको थियो । प्रेम प्रसङ्गको प्रश्नमा पहिलो प्रेम नि ? हल्का मुस्कान सहित बोल्छन, स्कुल पढ्दा नि प्रेम प्रस्ताब आएको हो, म आफै अलि लजाए हो कि प्रेम भएन ।’
उनले थपे, एकजना अपरिचित ब्यक्तिले केहि बर्ष अघी एक गिफ्ट पठाए, त्यो पनि चक्रपथको एक गिफ्ट शपमा । खोलेर हेरेको त गुलाफको फुल र महगो गिफ्ट देखे । मैले तत्काल उसैलाई फर्काइ दिनु भनेर फर्किए ।’ यो नै प्रेममा मेरो डेन्जर पर्पोज हो । आआफ्नो तरिकाले फोन, च्याट, मेसेजबाट थुप्रै प्रपोज आएको थियो । कुनै एक केटिले यती सम्म गर्‍यो कि आफ्नो तर्फबाट सके सम्म सबै प्रयास गरिन ।
अहिले पनि मिडियमा खुब नाम जोडिन्छ नि ? प्रश्नमा भन्छन दर्पन राई , ‘मिडियमा थुप्रै सँग नाम जोडिएको छ तर वी आर बेस्ट फ्रेण्ड्स ।’
ब्याबसायमा दर्पन राई
ब्याबसायको अर्को पाटो समाल्छन दर्पन राई । क्यापिटल पेन्टिङ ग्रुप कम्पनिको अध्यक्ष र एक सहकारी आफ्नै नेतृत्व गरी रहेको छन । शुरुमा कम्पनी स्थापना गर्दा निकै गल्ली गल्ली सङ्घर्षको बाटो हिडेको बताए । दर्पन राई ब्याबसायमा निकै सङ्घर्षको साथ सफल हुँदैछन । क्यापिटल पेन्टिङ ग्रुप कम्पनी अन्तरष्ट्रीय रुपमा कतारमा काम गरी रहेको छ , अब सन २०१९ मा नेपाल ल्याउदै छन । उनको लुकेको पाटो एक उधमशिल युवा ब्याबसायी हुन ।
दर्पन राईको लेखन
सानै उमेर देखी लेखन गरेका हुन, स्कुलले जिबन देखी नै कबिता कोर्ने गरेका थिए । ‘तिमीले बाटो फेर्‍यो अरे’ गित रेकर्ड गर्ने शन्दर्भमा एक अन्तरबार्तामा राजेश पायल राईले भनेको थिए ‘यस्तो राम्रो र कलिलो युवाले गित लेख्छन र’ ? गीतकार दर्पण राईले ‘तिम्ले बाटो फेर्‍यौ अरे’, तिमिलाई मनपराउनु, बेबी आईलभ-यू, मायामा जाल भो लगायत थुप्रै चर्चित गितहरु लेखेको छन ।
‘तिमीले बाटो फेर्‍यो अरे-२’
दर्पणको शब्दमा रहेको उक्त गीतमा नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका चर्चित गायिका मेलिना राईको स्वर रहेको छ भने पहिलो नेपाल आइडल विक्रम राईले गीतमा सङ्गीत भरेका छन् । रिकेश गुरुङको ऐरेन्जर रहेको उक्त गीतलाई राजेश स्थलै रेकर्डिङ गरेका छन् । ए–वान मुजिसियन स्टुडियोमा उक्त गीतको सिरिज ‘तिमीले खाएको कसम साँचो भएको भए’ बोलको गीत रेकर्ड गरिएको हो । अब अफिसियल म्युजिक भिडियो सहित केहि समयमा यो गित दमदार सार्बजनिक हुँदैछ । यो गीत अहिले निकै प्रतिक्षमा रहेको गित हो ।